Soo dejisan Mobdro 2.1.66 – Vessoft
Qeybta: Daawashada fiidiyowga
Bogga rasmiga ah: Mobdro
Mobdro – software ah si aad u aragto ku sii daayaa video oo dunida ku baahsan. software The helaa durdurrada video caanka ah ee maadooyinka kala duwan ka soo internetka. Mobdro soo jeediyo si ay u daawadaan news, sports, music, ciyaaraha, technology iyo qaybaha kale ee baahinta video ah. software waa ay awoodaan in ay ka heli durdurrada video on luqadood ee la doortay by user ah. Sidoo kale Mobdro u saamaxaaya in ay kala soocaan warbaahinta ee xuruufaha iyo xadidaya ay helaan adigoo isticmaalaya module waalidka. software waxa uu leeyahay interface a fudud oo si sahlan ay u isticmaalaan.
Video warbaahinta adduunka oo dhan
maadooyinka kala duwan ee durdurrada video ah
Selection of video durdurro leh ee afka lagama maarmaan
Banaynta taariikhda raadinta
Soo dejisan Mobdro
Faallo ku saabsan Mobdro
Mobdro Xirfadaha la xiriira